Cristiano Ronaldo Oo Macsalaameeyay Asxaabtiisa Juve Isagoo Seegay Tababarkii Maanta – Garsoore Sports
Cristiano Ronaldo ayaa macsalaameeyay asxaabtiisa Juventus wuxuuna seegayaa tababarkii kooxda ee maanta maadaama uu ku dhow yahay inuu ku biiro kooxda Manchester City.
36 jirkaan ayaa saacad iyo bar ku qaatay xarunta tababarka Juventus ee Continassa subaxnimadii Jimcaha si uu u faaruqiyo kabadhkiisa una macsalaameeyo kooxda kahor inta aysan garoonka u galin tababar.
Manchester City ayaa wadahadalo kaga jirta saxiixa 36 jirkaan kaddib markii Sky Italy ay sheegtay in wakiilkiisa Jorge Mendes uu u sheegay Juventus habeenkii Khamiista inuusan dooneynin inuu u ciyaaro kooxda.
Ronaldo ayaa ku jira sannadkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa Turin waxayna kooxda reer Talyaani ka codsanaysaa cid kasta oo doonaysa inay bixiso lacag dhan 25 milyan oo yuuro, taas oo caqabad weyn ku noqon karta kooxda City maadaama mushaharkiisa toddobaadkii uu sidoo kale gaarayo £ 500,000.
Juventus ayaan weli helin dalab rasmi ah oo ku aaddan Ronaldo. Wali waxaa jira wadahadalo u socda labada dhinac kahor inta aan la soo gabagabeyn heshiiska waxaana waqtigu ciriiri ku yahay dhammaystirka heshiis kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga Talaadada.